🥇 ▷ Sifeeyay gabi ahaanba cusub Huawei raqiis ah, Huawei Y5 2020? ✅
Sifeeyay gabi ahaanba cusub Huawei raqiis ah, Huawei Y5 2020?
Waxaan dhowr maalmood ku mashquulsan nahay arrimaha la xiriira TENAA, shahaadada Shiinaha oo ay ku socoto dhammaan mobilada la soo gudbiyo ee ka gudbaya suuqa Shiinays. Hadda waxaan ogaannay casri cusub oo Huawei ah. Suurtagal Xaashida macluumaadka Huawei Y5 2020, maadaama ay tahay ficil isku mid ah oo isku mid ah, marka isbadalku wuxuu yaraan karaa.
Huawei Y5 ee 2019 waa mid ka mid ah mobiladaas aan sameeynin dhawaaq badan marka la soo bandhigo, laakiin taasi runtii waxay ku dhammaan doontaa kaalin wanaagsan ka ciyaarista iibinta sumadda. Qaaciddada soo noqnoqoneysa Huawei oo uu Y.
Xaashida macluumaadka suurtogalka ah ee Huawei Y5 ee 2020
TENAA waxay na siineysaa waxyaabo badan oo cusub saacadihii la soo dhaafay, taas oo ku saabsan mobilo cusub oo gaari kara suuqa toddobaadyada soo socda. Hadda waxaan aragnay marinka casriga casriga ah ee Huawei, oo leh astaamo aasaasi ah, oo aan awoodnay inaan xaqiijinno Waxay ficil ahaan la mid tahay tii “Huawei Y5”, Gudaha iyo dibaddaba. Kaliya mid ka mid ah qaybaha lama shaacin, waxaana jiri kara isbedel dhab ah. Waan ogaan doonaa faahfaahintan si aan uga helno fikrad wanaagsan waxa casriga noqon kara.
The mobile in soo maray TENAA waa AMN-AL10, Moodeel la mid ah kii Huawei Y5 ee hore ee 2019, inkasta oo si sax ah loogu daro lambar cusub. Astaamaheeda, waxay leedahay a 5.71 inch inch leh HD + xalin. Processor-ka waa qeybta kaliya ee aanan aqoon, waxaan ognahay inuu leeyahay sideed koorso, sidaa awgeed si sax ah tani waxay noqon kartaa waji isbadala marka loo eego qarnigan cusub ee moodada caanka ah. Xusuusta RAM la heli karo waa 2GB ama 3GB, oo sidoo kale leh awood ka badan halkan tii hore qaabkii hore.
Kaydinta gudaha waa 32GB ama 64GB lagu fidin karo kaararka microSD. The camera waa 13 megapixels waxaana weheliya toosh toos ah. Wali malaha akhristaha farta sawirka sawirka hortiisa horteeda waa 5 megapixels. Batteriga wuxuu u eg yahay mid la mid ah, oo leh 2920mAh, xoogaa kayar awoodoodii hore. Waxay la timid Android 9 Pie waxaana lagu heli doonaa midab cagaaran, bunni iyo midab cagaaran. Marka la eego cabirka iyo dhumucda, waxay umuuqataa inay waxyar ka yaraynayso kana khafiifinayso kuwii ka horreeyay, oo leh cabbirro ah 147.13 x 70.78mm iyo dhumucdiisuna waa 8.45mm. Waxay umuuqataa mobiil raadad lagu hayo Huawei Y5 ee 2019, xitaa qaabeyntiisa, inkasta oo laga yaabo inay taasi si sax ah u tahay xogta aanan aqoon, processor-yadeeda, oo ay weheliso RAM dheeraad ah, ayaa ah sheeko cusub.